News - Airwoods HVAC: Mongolia Projects Ngosi
Airwoods arụzuola ihe karịrị ọrụ 30 na Mongolia nke ọma. Gụnyere Nomin State Department, Tuguldur Shopping Center, Hobby International School, Sky Garden Obibi na ndị ọzọ.
Anyị nwere ihe karịrị 50 ahụmahụ technicians ndị ọkachamara na HVAC na cleanroom imewe maka dị iche iche ụlọ ọrụ ngwa. Kwa afọ, anyị na-mezue ihe karịrị 100 oru ngo na mba dị iche iche. Ndị otu anyị nwere ike ịnye ngwọta HVAC zuru oke gụnyere onye na-ahụ maka ọrụ, imewe, ịwepụta akụrụngwa, nrụnye, ọzụzụ, mmezi, yana ọrụ ntụgharị nke ga-egbo mkpa ndị ahịa dị iche iche.
Anyị professionally rụpụta ume mgbake ventilators na ikuku ọcha ngwaahịa. Anyị na-a atta ntị na nkọwa ngwaahịa ma nwee oke nlezianya chọrọ. Ngwaahịa anyị agafeela ule CE na RoHS. Anyị na-enye ọrụ ODM maka ọtụtụ ụwa ama ama maka ikuku ikuku. A na-anwale ngwaahịa ọ bụla n'ime anyị ma jupụta nke ọma tupu ịnyefee ndị ahịa ọ bụla. Anyị ngwaahịa e exported karịrị 100 mba. Ọganihu ahịa kwa afọ karịrị 50%.
Biko lee anya n'okpuru maka ụfọdụ ederede nrụrụ aka na Mongolia.
Aha oru ngo: Nomin State Department
Ngwa: Sholọ Ahịa
Ọnọdụ: Ulaanbaatar, Mongolia
Ngwaahịa: AHU & Iyuzucha Igbe
Aha oru ngo: Tuguldur Shopping Center
Aha oru ngo: bbylọ Akwụkwọ Mmemme International
Ngwa: K-12 Private School
Ngwaahịa: AHU & Control
Aha Aha Aha: Urgoo IMAX Cinema
Ngwa: Shangri-La Center IMAX
Aha oru ngo: omlọ ahịa akwụkwọ
Ngwa: Ahịa akwụkwọ
Aha oru ngo: Ubi Ubi Sky
Ngwa: Okomoko Condominium
Product: Ikuku Ducting Ihe
Aha Aha: Tom N Toms Kọfị
Ngwa: Colọ ahịa kọfị
Post oge: Ọkt-28-2020